डायलासिस गरेर बिहीवार नै निवास फर्कने प्रधानमन्त्रीको तयारी
काठमाडौं – मिर्गौलाको डायलासिस गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीवार सरकारी निवास बालुवाटार फर्किने तयारी गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बुधवार बिहान करीब १० बजे प्रधानमन्त्री ओली ग्राण्डी अस्पताल पुगेका थिए ।
शुरूमा उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र नियमित फलोअपमा गएको बताइएपनि मृर्गाैलामा समस्या देखिएपछि अपराह्न मिर्गौलाको डायलासिस गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो ‘क्रिटिकल’ नभएको बताए ।
बिहीवार बिहान लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अर्यालले भने, ‘मैले भर्खर उहाँलाई भेटेर फर्कें । उहाँको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य छ । उहाँ आजै बालुवाटार फर्कने तयारीमा रहनुभएको मैले बुझेको छु ।’
अर्यालले डायलासिस सामान्य प्रक्रिया रहेको बताए । ‘डायलासिस गम्भीर किसिमको उपचार पद्धति होइन, केही मेडिकल किटहरूको सहायताले रगतमा रहेका बिकार हटाउने पद्धति हो,’ अर्यालले भने, ‘डायलासिसपछि उहाँ स्वस्थ देखिनुभएको छ ।’
जनचासो रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यस्थितिका बारेमा अस्पताल, ओलीको मेडिकल टीम र सचिवालयबाट कुनै सूचना दिइएको छैन ।
बुधवार साँझ अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डे र ओलीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहले हस्ताक्षर गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य परीक्षण बिहीवारसम्म सकिने र त्यसपछि डिस्चार्ज हुने उल्लेख थियो ।
गत भदौमा सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘प्लाज्मा फेरोसिस’ गरिएको थियो । शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा बढेपछि त्यसलाई कम गर्न ओलीको प्लाज्मा फेरोसिस गरिएको हो । फेरोसिस गरेपछि २ महिनासम्म ओलीलाई मृगौलासम्बन्धी समस्या देखिएको थिएन ।
तर बुधवार बिहान अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि ओली बुधवार ग्राण्डी अस्पताल पुगेका हुन् । एकपटक डायलासिस गर्न ३ देखि ५ घण्टासम्म लाग्छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुधवार अपराह्न ३ बजेतिर डायलासिस गरिएको थियो । यो प्रक्रिया हप्तामा ३ पटकसम्म दोहोर्‍याउनुपर्छ ।
दोस्रो पटकको डायलासिस बिहीवार हुने र तेस्रो पटकको डायलासिस केही दिनको अन्तरालमा गर्ने अस्पतालको तयारी रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । ‘कम्प्लिट रिजल्ट आउन तिनै पटक डायलासिस गर्नुपर्छ,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो ।